Auschwitz, ilay horohoro tantara ... Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Krakow, mpitarika
Ny iray amin'ireo lesona izay Ady Lehibe Faharoa misy ifandraisany amin'ny fankahalana, fanavakavahana, fankahalana olona mahatsiravina. 70 taona mahery taorian'ny nifaranan'ny ady toy izany dia toa tsy nianatra ny lesona azony izao tontolo izao. Auschwitz ao ve ny mahatadidy.
Azo antoka fa tsy dia fizahan-tany mahazatra ny mpizaha tany, tsy dia mahafinaritra kokoa, saingy mieritreritra aho fa manana fahefana hametraka antsika amin'ny axis izy io. Rehefa mitaraina momba ny mpifanolo-bodirindrina, mpifindra monina, olona samy hafa isika, rehefa mivadika fahasosorana sy fahatezerana ny tsy fahazoana aina, dia tokony hahatsiaro ny tantara isika mba tsy hianjera amin'ilay horohoro iray ihany.
2 Tsidiho i Auschwitz
Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa dia nanafika firenena maro tany Eropa i Alemana ary ny iray tamin'izy ireo dia Polonina. Ny milina Nazi dia nanamboatra fiara mifono vy, fiaramanidina, sambo mpisitrika ary baomba ary tamin'izany fotoana izany dia nandripaka olona an-tapitrisany tamin'ny fomba milamina sy antsipiriany araka izay azo atao. Izany no Tobin'ny fahafatesana ary ny malaza indrindra dia Auschwitz.
raha ny marina teraka tamin'ny sehatra tokana ary lasa sarotra amin'ny telo: Auschwitz I, Auschwitz II - Birkenau ary Auschwitz III - Monowitz, izay ampiana am-polony amina am-polony maro hafa, ambany na ambany toetra ny olona. Ity sarotra ity dia any Polonina, sahabo ho 43 kilometatra Krakow. Tombanana anio fa nandany olona maherin'ny iray tapitrisa tamin'ny telo tapitrisa sy zavatra iray izay nahazo ny loza nianjera tany.
Ny tobin'ny fifantohana sy famongorana voafehin'ny SS izy ireo, ny Schultztaffel na fonosana fiarovana, fikambanana miaramila, polisy ary fiarovana izay nanompo ny Antoko Sosialista Nasionaly ary, niaraka tamin'ny ady, dia nihetsika tamin'ny faritany rehetra nozanahiny. Azonao atao ny mieritreritra am-pitoniana karazana Inquisition.
Auschwitz I no foibem-pitantanana amin'ilay sarotra nandalovan'izy ireo ary tsy ny jiosy ihany fa ny mpanohitra politika, mpiasa na gypsies no maty. Ny hevitra hananganana ny toby dia avy amin'i Himmler, mpikambana ambony ao amin'ny SS hatramin'ny 1925. Notendreny ho komandy voalohany, Rudolf Hoss, hiandraikitra ny toby vaovao hatramin'ny 1940.
Ity saha ity dia natsangana ao amin'ny tanànan'ny Auschwitz, ao amin'ny High Silence, faritra iray izay tsy maintsy natolotra tany Polonina tamin'ny fanaovan-tsonia ny Fifanarahana Versailles. Olona manodidina ny 1400 no nonina tao ary jiosy ny ankamaroany. Ny tanjona voalohany amin'ny sehatra dia ny handresy ny mponina ary hamadika azy ho mpiasa.
Ireo gadra voalohany dia maherin'ny 700 mahery mpikatroka politika poloney izay tavela teo ambanin'ny fijerin'ny mpanao heloka bevava alemanina izay natao indrindra kapos, capos, gadra manokana nahavita ny asa fitantanana sy fanaraha-maso.
Jiosy, mpanao politika poloney, samy lehilahy na samy vehivavy, voafonja mahazatra, nianjera daholo izy ireo. Ilay sary dia mihodina eo anelanelany Olona 13 sy 16 arivo na dia tamin'ny 1942 aza dia nisy voafonja tokony ho 20. Niasa hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filentehan'ny masoandro izy ireo ozinina fitaovam-piadiana ary noho ny toe-pahasalamana sy sakafo mahatsiravina avo foana ny fiainana an-tany. Mazava ho azy fa aorian'izay dia nampiana fanahy iniana ireo maty, noho ireo efitranon-tsolika napetraka taorian'ny 1941.
Tany Auschwitz I dia nisy laboratoara roa ihany koa, ny iray fambolena ary ny iray niandraikitra fikarohana nataon'ny olombelona nataon'i Dr. MengeleAry toy ny hoe tsy ampy izany fampitahorana izany brothel izay nampiasain'ny gadra manana tombontsoa ary nampiasa ny mpivarotra ho mpivaro-tena.
Ho azy Auschwitz II - Birkenau no eritreritsika rehetra rehefa miresaka momba an'i Auschwitz. Eto dia Jiosy sy Gypsies an'arivony no nihidy ary naringana. Sahabo ho telo kilometatra eo ho eo avy eo amin'ilay voalohany ary misy fizarana maromaro. Tonga tao an-trano olona iray hetsy. Eto ianao tsy miasa, eto dia novonoina ary izany no antony nisy crematoria efatra misy efi-trano misy gazy izany dia afaka mahazaka olona 2.5900 isaky ny fiovana.
Maty haingana ny olona ary rehefa avy nizaha ny fatin'izy ireo mba hanala ireo farantsa volamena dia nankany amin'ny fandoroana faty. Ny zava-drehetra toy ny ao amin'ny orinasa iray, tsikelikely. Betsaka ny olona nandalo teto fa nisy andro tsy ampy ny lafaoro ary voatery nodorana anaty afo ny faty.
Auschwitz II - Monowitz Iray amin'ny sehatra faharoa izy io ary nifandray tamin'ny orinasa IG Farben tamin'ny famokarana solika vita amin'ny gazy sy solika. Ny marary na ny osa dia natolotra ny toby hafa hamonoana azy ireo ary noho izany dia maharitra ny fihodinana.
Ny isa omen'ny tantara antsika dia miresaka inona olona iray tapitrisa mahery no maty teto ary izany Ny 90% amin'izy ireo dia jiosy. Jiosy poloney, hongroà, frantsay, holandey, grika, aostraliana, alemà ary jiosy nozanahin'ny Nazia avy amin'ny firenena maro nanjakan'ny nazia, ary koa gadra sovietika sy gypana. Ary zavatra iray hafa: ny voafonja ao Auschwitz ihany no natao tatoazy.
Tsidiho i Auschwitz
Azonao atao izany amin'ny fitsidihana izay androany dia manodidina ny 40 euro miaraka amin'ny famindrana, fidirana amin'ny saha ary torolàlana manokana, na koa afaka mandeha samirery amin'ny lamasinina na fiara ianao. Amin'ny lamasinina dia azonao atao ny mankany amin'ny gara Oswiecim, izay akaiky indrindra, ary avy eto dia makà taxi na bus eo an-toerana. Amin'ny fiara fitateram-bahoaka avy eo amin'ny gara afovoan-tanàna ihany any Krakow izay mampifandray ny renivohitra amin'ny saha mivantana.
Misokatra isan'andro ny kianja golf manomboka amin'ny 7:30 maraina ka hatramin'ny 2 na 7 hariva, arakaraka ny fotoan'ny taona. Ho an'ity fitsidihana ity dia tsara ny hamandrika amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny tranokala mifandraika (visituschwitz.org) ary fidio ny andro fitsidihanao. Raha vao mifidy azy ianao dia afaka mamandrika ny fitsangatsanganana amin'ny fiteny samihafa. Manana ireo toerana misy ireo vondrona sy ny fandaharam-potoana ianao. Ohatra, ny fitsidihana miaraka amin'ny mpitari-dalana amin'ny teny espaniola mandritra ny 25 mey sabotsy ho avy izao dia mitaky zlotys 60, eo amin'ny 14 euro eo ho eo.
Ny fitsangatsanganana ankapobeny dia manomboka amin'ny adiny roa sy sasany ka hatramin'ny adiny telo sy sasany, misy ny fitsangatsanganana an-tsekoly ary ny fitsidihan'ny tsirairay dia afaka maharitra adiny telo sy sasany. Raha te hanana mpitari-dalana ianao dia tsy maintsy manao ny fangatahana ary mitahiry farafahakeliny dimy andro mialoha. Misy fampirantiana maharitra ao amin'ilay sarotra ka tsara raha drafitra ny fitsidihanao.
ihany koa misy tranombakoka sy fahatsiarovana. Ny tranombakoka dia miorina eo amin'ny sisin'ny tanànan'i Oswiecim, amin'ny zotra nasionaly 933, roa kilometatra miala ny gara ary azon'ny bus. Maimaimpoana ny fidirana amin'ny zaridaina fahatsiarovana fa tsy maintsy mitahiry ny fidirana ao amin'ny tranonkala ianao. Mazava ho azy fa misy fiampangana ny fampiasana torolàlana. Etsy ankilany, ny manodidina ny Auschwitz I sy II dia azo tsidihina amin'ny fotoanan'ny tsirairay avy amintsika ihany koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Krakow » Auschwitz, ilay horohoro tantara